China BA igwe anaghị agba nchara eriri igwe Manufacture na Factory | Huaxiao
BA elu bụ ihe pụrụ iche, dị ka enyo enyo ma ọ naghị enwu enyo. A na-akpọkwa mgbakwunye na-egbuke egbuke dị ka mmuke na-egbukepụ egbukepụ, bụ ịgbakwunye ngwaahịa ndị ahụ n'ime oghere dịpụrụ adịpụ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ opekata mpe 500, wee mee ka ngwaahịa ahụ dị jụụ ka dị n'ime oghere, mgbe nke ahụ gasịrị iji nweta nchapụta na elu mara mma, na enweghị na-akpata decarburization ọnọdụ.
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere BA igwe anaghị agba nchara eriri igwe, Bright Annealing igwe anaghị agba nchara eriri igwe
Imecha: BA, Na-egbuke egbuke
Ihe nkiri: PVC, Pee, PI, Laser PVC, 20um-120um, akwụkwọ ejirila
Ọkpụrụkpụ: 0.3mm - 3.0mm
Eriri igwe ID: 400mm, 508mm, 610mm
Ọkwa: 304 316L 201 202 430 410s 409 409L wdg
Nzube na uru nke nhazi igwe anaghị agba nchara
1.Iji kpochapụ ihe na-emesi obi ike n'ọrụ, iji nweta usoro ihe eji eme ihe na-eju afọ. Mgbe ojiji nke arụmọrụ dị iche iche chọrọ, microstructure nke annealed na-egbuke egbuke mgbe arịrịọ ahụ dị iche, usoro ọgwụgwọ ọkụ na-enwu gbaa dịkwa iche.
2.Nweta na-abụghị nke oxide na-enwu gbaa, ezigbo nguzogide corrosion nke elu. Ebe ọ bụ na annealing na-enwu gbaa na-ekpo ọkụ n'elu ngwaahịa ahụ n'okpuru ikuku nchebe nke ngwakọta nke hydrogen na nitrogen, a na-enweta ihu igwe na-enweghị ntụpọ na nke na-enwu gbaa site na ịchịkwa ikuku dị ọkụ, ọkachasị, ịdị ọcha, ikuku oxygen na igirigi. E jiri ya tụnyere elu enwetara site na nkedo na ntanye, a na-ebelata ebe a na-ewepu chromium n'ihi enweghị usoro oxidation, na nkwụsị nke corrosion dị mma karịa nke efere 2B mgbe ọ na-egbuchasị.
3.Nhazi ahụ na-enwu gbaa Nọgide Na-enwe mmezu nke ihu ịtụgharị, agaghị agagharịzi ya iji nweta ebe na-egbu maramara. N'ihi annealing na-enwu gbaa, eriri igwe ma ọ bụ mpempe akwụkwọ na-ejigide luster mbụ ya ma nweta ya na elu na-enwu gbaa nke dị nso na enyo ahụ, enwere ike iji ya mee ihe na-enweghị ngwa ndị ọzọ, maka ihe niile achọrọ.
4.Nwere ike ịme ihe ngosi pụrụ iche ma ọ bụ eriri igwe. Dịka usoro ntinye, enweghi mgbanwe na nchara, enwere ike idowe ihu ahụ kpamkpam, ị nwere ike ịmịpụ mpempe akwụkwọ oyi ma ọ bụ eriri.
5.ọ dịghị mmetọ mere site okporo pickling usoro. Mgbe ị gbasasịrị eriri ahụ achọghị ịtụtụ ma ọ bụ ọgwụgwọ yiri ya, anaghị eji ọtụtụ ihe kemịkalụ dịka acid, enweghị nsogbu mmetọ ọ na-ebute site na ịtụtụ.
6.Iji nweta akara nke igwe anaghị agba nchara eriri igwe straightness. Ebe ọ bụ na imepụta ọkụ ọkụ na-enwu gbaa na-enye ohere ngbanwe mpaghara mpaghara na obosara nke warara ma ọ bụ eriri igwe, enwere ike ịchọta njikwa akara nke mpempe akwụkwọ site na ịhazigharị ọnụego jụrụ oyi na ụzọ obosara nke warara site na ntụgharị ikuku.
Nke gara aga: NO.4 igwe anaghị agba nchara eriri igwe
Osote: Nkenke igwe anaghị agba nchara eriri igwe
301 Igwe anaghị agba nchara eriri igwe
304 Igwe anaghị agba nchara eriri igwe
Igwe anaghị agba nchara eriri igwe Manufacturers
Igwe anaghị agba nchara eriri igwe Ahịa